Beaches® Resorts waxay rabtaa inay ayeeyooyinkaaga ka dhigto TikTok Star -ka xiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Beaches® Resorts waxay rabtaa inay ayeeyooyinkaaga ka dhigto TikTok Star -ka xiga
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Technology • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xeebaha Xeebaha waxay bilaabayaan barnaamij cusub oo GrandEscapes ah oo loogu talagalay gaar ahaan fasaxyada ayeeyo-ayeeyooyinka ka dib markii waqti la kala qaatay.
Beaches® Resorts, oo ah hormuudka raaxada ee loo dhan yahay oo ah shirkad dalxiis oo saaxiibtinimo u leh qoyska, ayaa ku dhawaaqaysa jadwalkooda cusub si ay gacan uga geysato abuurista kan weyn ee weyn ee 'Tikfok'.
Dalxiiskan qoysku wuxuu siinayaa fasax riyo ah iyo casharrada “Granfluencer” ee TikTok wuxuuna u dabaaldegayaa dalab safar oo GrandEscapes ah.
Xeebaha Xeebaha waxay rabaan inay u abuuraan madadaalo ayeeyooyinka iyo awoowayaashooda khadka tooska ah, oo dib ula midoobaan qoysaska fidsan.
Xeebaha GrandEscapes waxaa si gaar ah loogu talagalay fasaxyada ayeeyo-awoowe ee jannada ka dib waqti aad u kala fog.
Hal awoowe oo awoowe ah oo nasiib leh ayaa ku guuleysan doona casharrada TikTok oo ka socda mid ka mid ah deeq -bixiyeyaasha ugu caansan madasha, @ourfilipinograndma, halkaas oo ay ku baran doonaan waxa ay u baahan tahay si TikTok loogu faafiyo fayraska oo loo galo 'Bogga Adiga' inta lagu guda jiro socdaalkooda Xeebta Xeebta.
Hadda illaa Noofambar 11, 2021, xubnaha qoysku waxay dhejin karaan fiidiyowga TikTok ee awoowe iyo ayeeyadood si ay ugu guuleystaan ​​barashada TikTok iyo fasax riyo shan habeen ah meel kasta Xeebaha Xeebaha ee Turks & Caicos or Jamaica. Si aad u gasho Xeebaha GrandEscapes sweepstakes, hal -abuurayaashu waa inay raacaan oo ay sumeeyaan @BeachesResorts on TikTok oo ku dar hashtag #BeachesGrandEscapes fiidyowyadooda fiidiyowga ah ee awoowayaashood qoob ka ciyaaraya, heesayaan ama ku boodayaan isbeddelkii ugu dambeeyay.
Kaliya maahan Dalxiisyada Xeebaha inay rabaan inay u abuuraan madadaalo ayeeyooyinka iyo ayeeyadood ayeeyada, laakiin isu keenidda qoysaska fidsan waxay ku jirtaa liiska ugu sarreeya. Marka lagu daro fursadda ah in lagu guuleysto fasax riyo ah iyada oo loo marayo TikTok, shirkadda dalxiiska ayaa soo bandhigaysa Xeebaha GrandEscapes, loogu talagalay gaar ahaan fasaxyada ayeeyo-awoowe ee jannada ka dib waqti aad u kala fog. Xeebaha GrandEscape waa mid ku habboon wakhti kasta oo sannadka ah, laakiin waqti xaddidan, waxaa jira dhiirigelin gaar ah oo loogu talagalay boos celisyada shan habeen ama ka badan, oo la sameeyay illaa Janaayo 9, 2022, ee socdaalka dayrta 2022. Boos -celinta muddadaas waxay heli doontaa mid gaar ah “ Sawirrada Qoyska loo Sameeyay iyo Xulashada Quraacda Dabeecadda Sesame Street ee loogu talagalay kooxda da 'yar, Red Lane® Manicure spa ee laba, ama “Kitty Katt” Catamaran Cruise oo loogu talagalay laba oo qoyska oo dhami ku soo biiri karo oo ku raaxaysan karo.
“Xeebaha, waqtiga qoysku waa wax walba. Waxaan aqoonsannahay sannadkii adkaa ee soo maray, gaar ahaan ayeeyooyin badan oo waayihii dambe aan arki karin carruurtooda ayeeyada ah inta badan ama, mararka qaarkood, haba yaraatee. Waxaan dooneynaa in qoysasku ay ka soo kabsadaan daqiiqadahaas la seegay, iyo waxa ka wanaagsan ee ka wanaagsan in la sameeyo taas marka loo eego Caribbean -ka quruxda badan, ”ayuu yiri Joel Ryan, Agaasimaha Madadaalada Mawduuca ee Xeebaha Xeebaha. "Hadafkayagu waa in qoysasku si wada jir ah u abuuraan xusuus waarta, iyo sababta oo ah meelaha dalxiisyadu ay wax walba u leeyihiin qof walba, GrandEscapes -ku waa hab la hubo oo Awoowe dib loogu celin karo."
Xeebaha ayaa ah meesha ugu dambaysa ee fasaxa ee awoowayaasha iyo ayeeyooyinka si ay u sii wadaan isku xidhnaanta, oo ay ku daraan madadaalo iyo wada jir markasta, da 'kasta. Carruurtu waxay ku raaxaysan karaan xeebta iyo Biyaha Biyaha ee Jasiiradda Pirates maalintii, oo aad Xbox® Lounge ama Xeebaha 'hoolka arcade xiiso leh habeenkii. Ilmaha ugu yar ayaa xitaa ka qayb qaadan kara waxqabadyada kuwa ay jecel yihiin Soodiinka Waddada®jilayaal oo ku raaxayso maaweelada habeen iyo maalinba asxaabtooda dhogorta leh. Waxqabadyada kale ee ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah barnaamijka qubeyska carruurta oo leh tababaro kala duwan oo loo yaqaan 'Scuba Divers' iyo casharo gaar loo leeyahay iyo naadiyada kubbadda koleyga. Dadka waawayn ee da 'kasta leh waxay ku raaxaysan karaan maqaayadaha iyo baararka gaarka ah, isboortiga dhulka iyo biyaha, Red Lane® Spa iyo kuwo kale oo badan, safar hal-nooc ah, oo loo dhan yahay oo ku habboon xubin kasta oo qoyska ah.
Si aad u gasho GrandEscapes Sweepstakes, booqo xeebaha.com/beachesgrandescapessweepstakes. Si aad u ballansato booqashada dhiirrigelinta fasaxa ee GrandEscapes xeebaha.com. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan fasaxa raaxada ee lagu daray Xeebaha, booqo xeebaha.com.
Iyada oo leh saddex goobood oo cajiib ah oo ku yaal Turks & Caicos iyo Jamaica, iyo goob afaraad oo imanaysa St. Vincent & the Grenadines, Beaches® Resorts ayaa ah meesha ugu dambaysa ee laga helo xubin kasta oo qoyska ah. Xeebaha Xeebaha waxay bixiyaan ka -soo -baxyo tayo sare leh marka loo eego shirkad kasta oo dalxiis oo meeraha ka jirta oo leh bar -biyoodyo aad u foolxun, XBOX® Play Lounges, Kaamamka Carruurta ee gaarka ah, goobaha lagu caweeyo ee dhallinta, Nannies -ka la xaqiijiyay, adeegga Butler, Red Lane® Spas, Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar PADI® oo khabiir ah. , iyo Wi-Fi bilaash ah. Iyada oo ah kafaala -qaade lagu faano Waddada Sesame, Xeebaha Xeebaha ayaa sidoo kale bixiya Adventures Caribbean -ka Sesame Street®, halkaas oo carruurtu ay ku qaadan karaan fasaxooda asxaabtooda ay jecel yihiin ee ka tirsan baandada Sesame Street oo leh hawlo maalmeed iyo bandhigyo masrax toddobaadle ah. Xeebaha Xeebaha ayaa ah meesha ugu habboon ee loogu talagalay isu imaatinnada qoyska laga bilaabo isu imaatinka iyo maalmaha dhalashada gaarka ah illaa barnaamijka arooska ee loogu talagalay saxiixa, Xeebaha Aroosyada La Habayn Karo. Xeebaha Xeebaha waxay dammaanad qaadayaan martida nabada maanka marka laga yimaado imaanshaha iyada oo la adeegsanayo Xeerarka Platinum ee Nadaafadda, tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee shirkadda oo la hagaajiyay ayaa loogu talagalay inay martida siiso kalsooni aad u weyn marka ay ku safrayaan Kariibiyaanka. Xeebaha Xeebaha waa qayb ka mid ah Sandals Resorts International (SRI) oo qoysku leeyahay, oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Luxury Included® Sandals Resorts, waana shirkadda ugu horreysa ee loo dalxiis tago ee Kariibiyaanka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Xeebaha Xeebaha, booqo xeebaha.com.